AW JAAMAC CUMAR CIISE: QORAA KU WEYN QULUUBTA QALINLEYDA SOOMAALIYEED – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Allaha U naxariistee Aw Jaamac Cumar Ciise oo kulansaday tilmaamo badan oo ay yar tahay inta leh waxaa uu ummadda soomaaliyeed kaga tegay kaydad dhaxal gal ah, kuwaas oo isugu jira Taariikh , Suugaan iyo dhaqanka soomaaliyeed.
Aw Jaamac Cumar Ciise Allaha u naxariistee in kasta oo aan la kulmin shaqsi ahaan haddana wuxuu ahaa Macallinkayga, waayo waxaan aqriyey buug badan oo uu qoray aqoonna ka kororsaday, waana xaq inaan u murugoodo geerida Aw Jaamac Cumar Ciise xusana abaalka uu ku leeyahay aniga iyo qof kasta oo aqriyey qoraalladiisa, waxa uuna ahaa allaha u naxariistee udub dhexaadka raad raac ee buugaag aan hore u qoray.
In kasta oo Soomaalida lagu sheego dad wax weriya balse aan inta badan wax qorin ayeysan oraahdaasu Aw Jaamac tilmaamayn maadaama uu ku soo kordhiyey buugaag fara badan Maktabadda Soomaaliyeed iyo tan Carbeedba.
Qoraallada Allaha u naxariistee Aw Jaamac Cumar Ciise oo ah kuwo saamayn leh si wanaagsanna loo tafatiray waxaa dhab ah in qofka aqrinayo uusan marna ka daalayn, taasi waxaa sabab u ah iyada oo qoraalku ka soo maaxday qalbi qof soomaalinnimadu ku weyn tahay aqoon durugsanna u leh diinta iyo dhaqanka suubban ee soomaaliyeed, waana kuwo dhammaantood raad raac u ah Taariikhda, Suugaanta iyo dhaqanka soomaaliyeedba.
Tilmaamaha uu lahaa allaha u naxariistee Aw Jaamac Cumar Ciise kagana soocnaa qorayaasha kale waxaa ka mid ah:
1- Xeel dheere shareecada Islaamka: Sheekh Jaamac Cumar Ciise aqoonta gunta dheer ee uu u leeyahay diinta islaamka waxay dhaxalsiisay inuu ugu adeego bulshadiisa isaga oo gudanaya waajibaadka saaran ee wanaag faridda iyo xumaan reebidda.
2- Cilmi baare kaydiyey qoraallo badan: Allaha u Naxariistee Aw Jaamac Cumar Ciise isaga ayaaba la oran karaa inuu ahaa Maktabad socota maadaama uu kaydiyey qoraallo badan oo lumi lahaa haddii uusan isagu isu xil saarin hawshaas baaxadda leh. Waxa uu xusay Aw Jaamac allaha u naxariistee in uu billaabay ururinta qoraalladda sanadkii 1955 oo ah xilli aad u fog, waxaa uu ku safray dhul dheer oo bah gooyo ah si uu u helo xog ku aaddan qoraallada uu danaynayey, isagoo ka qorayey afka dadka uu xogta ku tuhmayey, sidoo kale waxa uu qoraalkiisa ku kaydsanayey oo uu adeegsanayey farta carabiga maadaama far soomaaligu qornayn xilligaas.
3- Aqoontiisa Luuqadeed: Aqoonta ballaaran ee uu u lahaa Aw Jaamac allaha u naxariistee luuqadaha soomaaliga iyo carabiga waxa ay u ahayd dhiirrigelin in uu ku soo bandhigo kaydadkiisa aqooneed, waxaana ka faa’iidaystay buugta tirada badan ee uu Aw Jaamac ku qoray labadaas luuqadood dadka aqriya luuqadaha Soomaaliga iyo Carabiga.
4- Hibada eebbe u siiyey aqoonta Suugaanta. dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed:
Aqoonta uu Aw Jaamac Cumar Ciise Allaha u naxariistee u laha hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxa ay ka muuqanaysaa qoraallada baaxadda leh ee uu ku soo bandhigay labadiisa buug ee Diiwaanka Sayid Max’ed Cabdulle Xasan oo uu qoray sanadkii 1974kii iyo buugga casriga ah ee Hilimada Maansadii hore ee uu daabacay 2005tii. Qofka aqriya labadaas buug waxaa ku soo duxaya hodontinimada Suugaanta, hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed.
5- Aqoonta uu u lahaa Taariikhda dalka iyo dadka Soomaaliyeed: Waxaa si fudud loo oran karaa in Sh. Jaamaca Cumar Ciise allaha u naxariistee uu ahaa taariikhyahan sugay taariikhda soomaaliya dhul iyo dadba laga soo billaabo xilliyadii dhexe, waxaa u dheer Aw Jaamac allaha u naxariistee aqoontiisa taariikheed in uu si ammaano leh u gutay soo bandhigidda buugtiisa taariikheed, isaga oo si dhab ah u sugay dhacdooyinka ku xusan qoraalladiisa, maadaama taariikhaha iyo dhacdooyinku yihiin kuwo la isku khilaafi karo.
6-	Hufnaan iyo Soomaalinimada oo ku weynayd: Aw Jaamac Cumar Ciise waxa uu ahaa allaha u naxariistee mid si hufan u gutay qoraalladii faraha badnaa ee uu kaga tegay bulshada soomaaliyeed, waxa ay maanta qoraalladiisu ka mid yihiin kuwa ugu kalsoonida badan oo aysan jirin cid xasaasiyo ka qabto, iyada oo aan ognahay in ay liidato kalsoonida bulshadu heerka ay gaarsiisan tahay dagaalladaii sokeeye ka dib.
7- Shaksiyad dhanka san u debecsan: Shakhsiyadda Sh. Jaamaca Cumar Ciise oo ahayd mid debecsan oo waxa ay ka marnayd han dhaqaale, taas oo aan ula jeedo in buugtiisa uu qoray ula jeeday dar alle iyo danaha dadkiisa iyo dalkiisa, iyada oo aan ognahay in qorayaashu ku xisaabtamaan in waxa ay qoraan ka sameeyaan dhaqaale. Waxaa daliil cad innoogu filan in Aw Jaamac sida uu xusay qoraalladiisii burburka ka dib u qaxiyey Nairobi isaga oo aan hayn shilin uu ku daabaco ayna dhacdo in qoraalladii uu muddadada fog kaydinayey saddex meelood meel ku luntay dagaalladii sokeeye halka labada kale ay u badbaaday, intaas ka dibna waxaa gacan weyn ka siiyey daabacaadda buugtaas mahadi ha ka gaartee madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxaan ka rajaynayaa in inta gacanta ku haysa qoraalladii daabacnaa iyo kuwa aan daabacnaynba ee Aw Jaamac Cumar Ciise la baahiyo loogana faa’iideeyo bulshada soomaaliyeed iyada oo ay qoraaga u noqonayso sadaqo jaariyah eebbe idinkiis.
Ugu dambayn waxaa ammaan iyo bogaadinba leh intii uu qoraagu ararta buugtiisa ugu mahad celiyey kuwaas oo mid waliba kaalin ku lahaa dedaalka soo bandhigidda buugaagtii uu qoray Aw Jaamac Cumar Ciise.
Dhaxalkii Aw Jaamac Cumar Ciise Allaha u naxariistee waxaa ka mid ah:
No,	Magaca Buugga, iyo Luuqadda uu ku qoran yahay
1	Taariikhdii Soomaaliya ….,	Carabi
2	Taariikhdii aasaasayaashii S.Y.L,	Carabi
3	Taariikhdii Jeneraal Daa’uud, Carabi
4	Kacaankii 21kii Oktoobar,	Carabi
5	Taariikhdii hore ee Muqdihso iyo haatan, Carabi
6	Taariikhda Jabuuti iyo dedaalkeeda dib u heshiinta Soomaaliya,	Carabi
7	Taariikhdii Daraawiishta,	Carabi
8	Taariikhda Geeska Afrika,	Carabi
9	Diiwaanka Gabayadii Sayid Max’ed,	Soomaali
10	Taariikhdii Daraawiishta,	Soomaali
11	Qaran jabkii Soomaaliya, Soomaali
12	Maansadii hore ee Soomaalida (Geela, Fardaha iyo haweenka,	Soomaali
13	Hilimada Maansadii hore ee Soomaalida,	Soomaali
Qore: C/qaadir Max’ed Xasan
002526-1-5587807 Muqdisho – Soomaaliya.